Igumbi lendlovukazi elinesitayela, elisebenziseka kalula elinehhovisi lasekhaya eduze nedolobha - I-Airbnb
Igumbi lendlovukazi elinesitayela, elisebenziseka kalula elinehhovisi lasekhaya eduze nedolobha
North Melbourne, Victoria, i-Australia
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Work Sleep Live
U-Work Sleep Live Ungumbungazi ovelele
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Eph 15.
Leli gumbi elithule, eliyimfihlo, elilungiswe ngokuphelele ngezinto ezifakwayo zekhwalithi ephezulu, lilungele ochwepheshe noma izivakashi ngokufanayo. Akukhona nje kuphela ukuthi unayo yonke induduzo nobumfihlo bekamelo lakho, ungakwazi futhi ukufinyelela ezindaweni ezivamile kusuka endlini, okuhlanganisa amakhishi amabili, izindawo zokugeza ezimbili, nezindawo zokugezela ezine, kanye nezindawo zayo ze-barbecue ezingu-2, indawo yophahla, igceke, kanye nezindawo ezahlukene zokusebenza ngokubambisana. Uhamba ibanga ukusuka ku-Errol Street namakhefi awo, i-Queen Victoria Market, kanye nedolobha. Uma uthanda wena
Leli yindlu yokulala yangasese enombhede wenkosi eyodwa (203x107cm), ideski elimile, nekhabethe, endlini enkulu evuselelwe kabusha ye-Victorian enezitezi ezimbili, eyenzelwe ukunethezeka nokukhiqiza. Uzoba negumbi lakho langasese, elivikelwe ilokhi ye-elekthronikhi, ngenkathi wabelana ngezinye izindawo ezivamile. Phezulu uzothola indawo yokudlela, ingadi eqondile, nendawo yokusebenzela, kuyilapho phansi kunesikhungo sebhizinisi kanye nenye indawo yokusebenzisana. Zombili lezi zitezi zinekhishi eligcwele, elondolo, namagumbi okugeza amabili. Idekhi yophahla iyindawo ekahle yokuphumula, ukusebenza, ukuhlangana nabantu abasha, indawo yokosa inyama, futhi ujabulele ukubuka idolobha. Uma lina, igceke elingaphansi kanye nendawo yokosa inyama iyasibekela.
ubusuku obungu-7 e- North Melbourne
INorth Melbourne ithola ukunakwa okwengeziwe, njengoba iseduze nedolobha futhi nokho ilondolozwe futhi iyiqiniso ngokuvikelwa kwamagugu okubanzi (okubandakanya le ndawo). Izakhiwo ezinhle zama-victorian, imigwaqo ephahlwe yizihlahla, nezindawo eziluhlaza kunikeza umakhelwane umuzwa ophumuzayo. Kodwa-ke, usazothola uhla oluhle lwamakhefi, ama-pubs kanye nezindawo zokudlela zonke ezisebangeni lokuhamba ngezinyawo. Inyuvesi yaseMelbourne, iMelbourne Zoo, iRoyal Park, nezibhedlela ezahlukahlukene zonke zisendaweni.
Ibungazwe ngu-Work Sleep Live
Ngokuvamile kuba khona umamukeli onobungane endlini uma unemibuzo.
UWork Sleep Live Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- North Melbourne namaphethelo